Hiigsi & Hayaan: Maxaa dhib laga soo maray yagleelka Jaamacadda Bariga Afrika (EAU)? (daawo qaybtii 3aad) – Radio Daljir
Hiigsi & Hayaan: Maxaa dhib laga soo maray yagleelka Jaamacadda Bariga Afrika (EAU)? (daawo qaybtii 3aad)
Oktoobar 9, 2018 4:41 g 0
Jaamacadda Bariga Afrika (East Africa University – EAU) waa hormuudka jaamacadaha Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya, laakiin waxaa jiray xilli Puntland ay ka marnayd jaamacado iyo tacliin sare toona.
Arday badan ayaa sannadkaan u xaadiraya heer jaamacadoodkii koowaad, kuwa kalena waa jaamiciyiin Jaamacadda Bariga Afrika. Arday badan oo arday jaamacadeedka sannadkaan ahi ma oga waxa laga soo maray EAU iyo ragga u soo tiir iyo tacab beelay yagleelka jaamacadda. Haddaba dhowrka barnaamij ee soo socda waxa aan idin kula qaybsan doonnaa waxa laga soo maray yagleelka Jaamacadda Bariga Afrika.
Hoos kaga bogo QAYBTII 3aad ee HIIGSI & HAYAAN oo la qaybso ardayda sannadkaan ku cusub Jaamacadda Bariga Afrika iyo inta aan ka warqabin waqtiyada la soo maray iyo waxa laga soo maray.
HIIGSI & HAYAAN 59 Wararka 25390
Sheeko Gaaban: Guuldarro Jacayl God ma loo Galaa! (Taxanaha 7aad maqal/muuqaal)